သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ - Besca စက်မှု Co. , Ltd
ရှန်ဟိုင်း Besca စက်မှု Co. , Ltd မှ
ရှန်ဟိုင်း Besca စက်မှု Co. , Ltd မှ သင့်ရဲ့ privacy ကိုရိုသေလေးစားခြင်းနှင့်အလေးအနက်ထားသင့်အွန်လိုင်းလုံခြုံဘေးကင်းလုံလုံခြုံခြုံ။ အကောင်းဆုံးကိုထုတ်ကုန်အကျိုးရှိစွာဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အစာရှောင်ခြင်း updates များကိုအတူသင်တို့သည်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ကိုမှသင့်ရဲ့ခရီးစဉ်မှသတင်းအချက်အလက်အမျိုးမျိုးမှတ်တမ်းတင်။ ပိုကောင်းတဲ့သင့်ရဲ့ privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်, ကျွန်ုပ်တို့အွန်လိုင်းသတင်းအချက်အလက်များအလေ့အကျင့်များနှင့်သင့်အချက်အလက်များကိုစုဆောင်းအသုံးပြုသည်လမ်းကိုရှင်းပြချင်ပါတယ်။
ရှန်ဟိုင်း Besca စက်မှု Co. , Ltd မှ သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ
(site ကိုလိပ်စာ၏ website ကိုရယူသုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် https://www.bescatray.com/ ) ။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ privacy ကိုလေးစားခြင်းနှင့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များကာကွယ်ပေးချင်တယ်။ ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်, ငါတို့ကိုယ်ရေးသတိပေးချက်ဖတ်ပါ
ဤ Privacy သတိပြုပါကျနော်တို့စုဆောင်းပုံကိုကရှင်းပြသည်ကိုသုံးပါနှင့် (အခြို့သောအခြေအနေများအောက်တွင်) သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များထုတ်ဖော်။ ဒါဟာကိုယ်ရေးသတိပေးချက်လည်းငါတို့သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်လုံခြုံမှုခေါ်ဆောင်သွားပြီခြေလှမ်းများကရှင်းပြသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဤ Privacy သတိပြုပါစုဆောင်းခြင်း, အသုံးပြုခြင်း, သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏ထုတ်ဖော်နှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုများကရှင်းပြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုလာရောက်လည်ပတ်ခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်ဤသတိပြုပါမှာဖော်ပြထားတဲ့အလေ့အကျင့်လက်ခံပါ။
ဤ Privacy သတိပြုပါသာဒီဆိုက်ကိုသက်ဆိုင်သည်။ ဒါဟာ privacy ကိုမူဝါဒကသေချာပေါက်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့အော့ဖ်လိုင်းစုဆောင်းခြင်းလျှောက်ထားမထားဘူး။ အသေးစိတ်ကိုကိုအောက်တွင်ဖတ်ရှုပါ။ ကျနော်တို့ဆိုမဟုတ်သောအပေါ်အကြောင်းအရာသို့မဟုတ် privacy ကိုအလေ့အကျင့်အတွက်တာဝန်ရှိသည်မဟုတ် https://www.bescatray.com/ သောဤဆိုက်ကိုဖို့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ကိုမှလင့်များကြောင်းဆက်သွယ်နိုင်ရန်က်ဘ်ဆိုက်။
1. ပြန်ကြားရေးငွေကောက်ခံ။ ငါတို့သည်ဤဆိုက်ကိုအပေါ်အများအပြားကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေအတွက်သင့်ထံမှသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းပါ။ သင့်ထံမှပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းအတွက်တစ်ခုမှာရည်မှန်းချက်တစ်ခု, ထိရောက်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောနှင့်စိတ်ကြိုက်အတွေ့အကြုံများကိုရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျနော်တို့မှသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးနိုင်သည်:
သငျသညျလျင်မြန်စွာသတင်းအချက်အလက်, ထုတ်ကုန်, နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုရှာဖွေကိုကူညီပါ။
အသစ်ကသတင်းအချက်အလက်, ထုတ်ကုန်, ကြှနျုပျတို့ပူဇော်ကြောင်းန်ဆောင်မှုရန်သင့်အားအသိပေးပါ။
ပုံမှန်အားဖြင့်, သင်သည်ဤ website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များပေးရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ သို့သော်ဝန်ဆောင်မှုများ၏အရည်အသွေးတိုးတက်စေရန်အလို့ငှာ, ကုမ္ပဏီပိုကောင်း, တစ်ချိန်တည်းသငျသညျအစေခံရန်သင့်လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်ရန်ကုမ္ပဏီ enable လုပ်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုပံ့ပိုးပေးရန်လိုအပ်ပါသည်စေခြင်းငှါ, ကုမ္ပဏီပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်သည်သင်အတည်ပြုရန်အစီအမံယူခွင့်ရှိသည် စစ်မှန်သည်။ သငျသညျကိုအခြားသူများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များသည်လျှင်, သငျသညျအခွားသူမြား၏တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်စေပြီ။ သင့်ကိုယ်ပိုင်ဆန္ဒကိုအဘို့, ကုမ္ပဏီကိုမဆိုတတိယပါတီများအတွက်ကုမ္ပဏီနှင့်၎င်း၏ affiliates မှသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များဝေမျှမည်မဟုတ်မဟုတ်လျှင်အဆိုပါကုမ္ပဏီ, ကတိပေးထားတယ်။
(က) ပြည်တွင်းအသုံးပြုမှု။ ငါတို့သည်သင်တို့၏အမိန့်ကို process နှင့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်တကွသင်ပေးရန်သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုပါ။ ကျနော်တို့ပြည်တွင်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုရဲ့အကြောင်းအရာနှင့် layout ကိုတိုးတက်စေရန်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်သုံးနိုင်ပါသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဝေးရောက်တိုးတက်စေရန်နှင့် (သင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ဆောင်မှုများနှင့်ထုတ်ကုန်စျေးကွက်အပါအဝင်) ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအားထုတ်မှုများအတွက်, ဤဆိုက်ကိုမှဧည့်သည်များနှင့် ပတ်သက်. ယေဘုယျစျေးကွက်သတင်းအချက်အလက်ဆုံးဖြတ်ရန်။
(ခ) သငျနှငျ့အတူဆက်သွယ်ရေး: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ကို, သင်၏အမိန့်များနှင့်ပေးပို့အကြောင်းကိုသင်တို့နှင့်အတူအဆက်သွယ်ဖို့သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူမှတ်ပုံတင်ရန်သည့်အခါလည်း, ငါတို့သည်သင်တို့အတည်ပြုချက်အီးမေးလ်ပေးပို့လိမ့်မည်။
(ဂ) ပြင်ပအသုံးပြုခြင်း။ ကျနော်တို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုနှင့်တကွသင်ပေးရန်နှင့်သင်တစ်ဦးအကြီးအရွေးချယ်ရေးပူဇော်ချင် - ငါတို့သည်အဓိကအားကုန်သွယ်မဟုတ်ဘဲသတင်းအချက်အလက်များရောင်း။ ကျွန်တော်တို့သည်ငှား, ကုန်သွယ်ရေး, လိုင်စင်ရောင်းကြဘူး, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ရင်သင့်ရဲ့တိကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်ဘဏ္ဍာရေးသတင်းအချက်အလက်မည်သူမဆိုမှထုတ်ဖော်။
ဤသည်ဆိုက်ကိုဒီဆိုက်ကိုအားဖြင့်ခပ်သိမ်းသောဘဏ္ဍာရေးအရောင်းအဘို့အ Secure Sockets Layer ( "SSL ကို") အပါအဝင်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏လျှို့ဝှက်ချက်များ, ကာကှယျစောငျ့ရှောကျဖို့, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအီလက်ထရောနစ်နှင့်စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ဆက်နွယ်။ ကျနော်တို့အွန်လိုင်းသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက် SSL encryption ကိုသုံးပြီး, ငါတို့သည်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆောက်အဦများတွင်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အတော်ကြာခြေလှမ်းများယူပါ။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကို Access ကိုကန့်သတ်ထားပါသည်။ တိကျတဲ့အလုပ်လုပ်ဆောင်မှသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုလက်လှမ်းမလိုအပ်သူကိုသာဝန်ထမ်းသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်ရယူသုံးစွဲနိုင်ခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာဟာ့ဒ်ဝဲတချို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံရေး Third-party ဝန်ဆောင်မှုပေးအပေါ်အားကိုး။ ကျနော်တို့ကိုသူတို့ကလုံခြုံရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများလုံလောက်သောဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာဥပမာအားဖြင့်, သင်ကသော့ခတ်လှောင်အိမ်နှင့်အီလက်ထရွန်းနစ် firewall ကနောက်ကွယ်မှ, လုံခြုံတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်တွင်ထားရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းဆာဗာများကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှု။
ငါတို့သည်သင်တို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုစောငျ့ရှောကျဖို့စက်မှုလုပ်ငန်း-စံကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကိုအသုံးပြုဖို့နေချိန်မှာကျနော်တို့ပြည့်စုံလုံခြုံရေးအာမခံလို့မရပါဘူး။ 100% ပြည့်စုံလုံခြုံရေးလက်ရှိဘယ်နေရာမှာမဆိုအွန်လိုင်းသို့မဟုတ်အော့ဖ်လိုင်းမတည်ရှိပါဘူး။